Soosaarayaasha & Shirkadaha Soo Saarida Jirka - Plant
Habka baaritaanka kala-baxa kuleylka ayaa cabbiri kara cufnaanta socodka socodka degdegga ah ee jirridda geedka, taas oo si joogto ah u daawan karta qulqulka dareeraha geedaha muddo dheer, taas oo caawinaysa in la barto sharciga is-weydaarsiga biyaha ee u dhexeeya geedaha iyo jawiga, oo tanna qaado iyada oo ah habka indha indheynta si loola socdo saameynta nidaamka deegaanka keynta ee isbeddelka deegaanka muddo dheer. Waa muhiimad aragtiyeed iyo qiime dalab oo ku saabsan dhirayn, maaraynta keymaha iyo maaraynta keymaha.
Mitirka neefsashada ee saxan sare FK-GH10
Waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa go'aaminta iyo falanqaynta xoojinta neefsashada ee miraha iyo khudradda heerkulka caadiga ah, keydinta qabowga, keydinta jawiga la xakameynayo, qaboojiyaha dukaamada waaweyn iyo xaaladaha kale ee keydinta. Astaamaha qalabku waa inuu dooran karo mugga qolka neefsashada iyadoo loo eegayo cabbirka miraha iyo khudradda, kaas oo dedejiya dheelitirka iyo waqtiga go'aaminta; waxay si isku mid ah u soo bandhigi kartaa isku-uruurinta CO2, fiirsashada O2, heerkulka iyo qoyaanka qolka neefsashada. Qalabku wuxuu leeyahay astaamaha waxqabadka badan, saxsanaanta sare, dhakhso, wax ku ool ah oo ku habboon. Waxay aad ugu habboon tahay go'aaminta neefsashada dhammaan noocyada miraha iyo khudaarta ku jirta cuntada, khudradda, khudradda, khudaarta, ganacsiga shisheeyaha iyo iskuulada kale iyo machadyada cilmi baarista.